Malaza eo amin’ny indostrian’ny sarimihetsika ao Pakistan ny #MeToo · Global Voices teny Malagasy
Miatrika fitsarana raharahan-kerisetra an-tokantrano i Mohsin Abbas Haider
Voadika ny 17 Aogositra 2019 7:59 GMT
Herintaona taorian'ny nidiran’‘ilay mpilalao sarimihetsika Meesha Shafi tao amin'ny Twitter mba hiampanga an'i Ali Zafar momba ny fitondran-tena ratsy ara-nofo, iharan'ny adihevitra be indray ny indostrian'ny fialamboly Pakistaney. Tamin'ity indray mitoraka ity dia voampanga tamin'ny herisetra an-tokantrano ilay mpilalao sarimihetsika sady mpiangaly mozika Mohsin Abbas Haider ary miandry fitsarana. Ao anatin'ny hetsika #MeToo manerantany, rehefa mahazo vahana ny antso hino ny tantaran'ny vehivavy, dia haingana avy hatrany ireo mpiserasera manohana ny mpiampanga an'i Haider.
Tamin'ny 20 Jolay 2019 tao amin'ny pejiny Facebook, nampangain'i Fatima Sohail, vadiny, ho nidaroka azy i Haider. Ahitana ny sarin'ny tarehiny miaraka amin'ny ratra hita mazava ilay lahatsoratra.
Ny 26 novambra 2018, tratrako namitaka ahy ny vadiko. Rehefa nifanatrika taminy aho, raha tokony ho menatra izy dia mbola nanomboka nidaroka ahy indray. Bevohoka aho tamin'izany fotoana izany!
Nosintoniny ny voloko, notaritiny tamin'ny tany aho, nodakany imbetsaka, namelaka tahamaina ahy izy ary nanipy ahy tamin'ny rindrina.
Narahana tati-baovao voalohany (FIR amin'ny teny Anglisy) ofisialy izany taty aoriana, izay nahitana filazana fa nidaroka, nanararaotra ary niherisetra” tamin'i Sohail i Haider hatramin'ny nanombohan'ny fanambadian'izy ireo. Raha navotsotra vonjimaika izy mandra-pahatonga ny 16 Aogositra, dia maro ireo olo-malaza manohana ny vadiny ary nijoro vavolombelona mikasika ny herisetra ao an-tokantrano niaretan'i Sohail ihany koa. Mpilalao sarimihetsika sady mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra, Dua Malik, nilaza fa nahita maso ny fihetsika feno herisetra nataon'i Haider nandritra ny telo taona. Nandefa fanambarana tamin'ny alàlan'ny tantara iray nalefa tao amin'ny kaontiny Instagram ofisialy izy:
Pikantsary tao amin'ny Instagraman'i Malik. Sary avy amin'ny geo.tv
Nizara ny fijoroany vavolombelona amin'ny maha nanatri-maso faharoa azy ihany koa i Mirza Gohar Rasheed tamin'ny alàlan'ny siokany;
Vavolombelona tsy mivantana ny tsy rariny nitranga tamin'i #FatimaSohail aho tamin'ny taona 2018 raha nitondra an'i #Fatima tany amin'ny hopitaly ny namako taorian'ny nidarohan'i #MohsinAbbasHaider azy. Tamin'i Fatima no nahafantarako ny tantara manontolo. Toy ny rahavaviko i Fatima amiko (1/3)
Te-hiaro ny fanambadiany sy hiantoka ny mahasoa ny zanany i SHE ka nanaja izany izahay ary nangina saingy satria efa navoakany ankehitriny ny marina (mankahery anao #fatima) (2/3) #justiceforfatima
Te-hiteny aho fa loza mitatao ho an'ny fiarahamonina ny lehilahy toa azy, tsy olombelona tsy misy hazon-damosina sy mampalahelo ihany no fahitako azy, fa loza mitatao koa. Mila ny rariny i Fatima ary mila FANAMPIANA ny vadiny. #justiceforfatima (3/3)
Nolavin'i Haider avokoa ny fiampangana azy rehetra tamin'ny alàlan'ny valan-dresaka ho an'ny mpanora-gazety, nilaza izy namaly faty azy i Sohail satria te-hanambady vehivavy hafa izy, izay araka ny filazany, fa zony ara-dalàna sy ara-pinoana. Nambarany fa sary tamin'izy nianjera tamin'ny tohatra tamin'ny taona 2018 ny sary mipetaka amin'ny lahatsorany:
Raha nidaroka azy foana nandritra ny efa-taona aho, nahoana no tsy misy tatitra ara-pitsaboana?
Nahoana isika no mirona any amin'ny vehivavy hatrany? Tsy voatery ho marina ny vehivavy rehetra mitomany; nahoana no tsy tokony ho disoina ny lehilahy? Mandehana mijery ny zava-misy ara-tsosialy ataon'ny olona fotsy hoditra, rehefa miady eny an-dalana ny lehilahy sy ny vehivavy, ary mamely tehamaina ny lehilahy ny vehivavy, dia tsy misy taitra, fa mihomehy sy maka sary fotsiny ny olona. Fa raha misy lehilahy manosika vehivavy, dia mijanona ny olona ary manomboka miady amin'ilay lehilahy.
Maro ny olona tezitra tamin'ny fanambarany, ka niditra media sosialy mba haneho ny fahatezeran'izy ireo:
Niharan'ny herisetra ara-nofo ianao ary tsy hino ny teninao amin'izany ny olona fa hangataka porofo. Voadaroka lasa mangana ianao ary manana porofo an-tsary ka hilaza ny olona fa misy lafiny hafa amin'ilay tantara. Tsy afaka handresy amin'ny maha-vehivavy ianao. #MohsinAbbasHaider
Maro ireo mitaky ny rariny ho an'i Fatima #JusticeforFatima. Dua Aamir nisioka hoe:
Mandrisika ny olona aho, indrindra fa ireo manam-pahefana mba hijery akaiky ny fanararaotana nihatra tamin'i #FatimaSohail. Raha tsy mahazo rariny ity vehivavy be herim-po ity izay nizara ny tantarany tamin'ny olona an-tapitrisany, dia isika amin'ny maha-fiarahamonina mihitsy no manala-baraka ny tenantsika ary mandray ny herisetra an-tokantrano ho toy ny ara-dalàna. #MohsinAbbasHaider
Voaroaka tamin'ny asany amin'ny maha mpanolotra fandaharana amin'ny fantsom-pahitalavitra fanta-daza iray i Haider iray andro taorian'ny nametrahana ny FIR. Nisy ny olona nanohana azy, nangataka mba tsy hanafangaro ny fiainana manokana sy ny asa:
Mino aho fa tokony tsy misy hidirany amin'ny Fiainana Arak'asa ny Fiainanao manokana. Tsy tokony nandroaka an'i #MohsinAbbasHaider tao amin'ny MazaqRaat ny Duniya Newssatria satria Andriamanitra irery no mahalala ny marina.
Raha mbola ao amin'ny fitsarana ny raharaha, manohy manaporofo ny maha tsy meloka azy i Haider ary hanohitra ny lafin'ny tantaran'ny vadiny. Tamin'ny 26 Jolay nandefa lahatsary misy ilay mpanakanto mampiadihevitra Waqar Zaka izy, nilaza i Zaka tamin'izany fa nahazo antso avy amin'ireo olona tao amin'ny trano famokarana malaza iray izy, izay nilaza fa niaraka tamin'ny olona “tsy notononony ny anarany” i Sohail raha mbola nanambady an'i Haider. Tsy vitany hoe tsy nahavita naneho porofo momba ny filazany i Zaka fa nilaza ihany koa izy fa tsy mpitsara momba ny marina sy diso izy.
Olana lehibe ao Pakistan ny herisetra ao an-tokantrano; na izany aza, tsy zavatra resahina ampahibemaso izy io. Taorian'ny niantombohan'ny hetsika #MeToo, nanomboka niresaka momba ity lohahevitra fady ity ireo vehivavy Pakistaney.